Strawberry Keke Sanganisa Recipe (Doctored Bhokisi Sanganisa) - Cake
Iyo sitirobheni keke sanganisa nzira inoita iro bhokisi musanganiswa kuravira zvinenge zvakangonaka seyakagadzirwa!
Zvakanakisa sitirobheri keke sanganisa recipe! Ndiri kubatikana nekanaka sitirobheri keke kubva pakutanga asi dzimwe nguva ndinongova ndisina yakawanda nguva uye ndinoda yakanaka sitirobheni keke recipe FAST! Iyi ndiyo yangu yekuenda-kune sitirobheni keke musanganiswa recipe nelemoni nyore buttercream!
Ndeipi yakanakisa sitirobheni keke musanganiswa?
Ini pachangu ndinofarira Duncan Hines bhokisi rinosanganiswa. Ndinofunga vanonaka zvakanakisa uye vanonyorova kwazvo. Yadzo sitirobhokisi bhokisi musanganiswa yatove yakanyanya kunakidza asi ini ndinowedzera mune mashoma zvigadzirwa kuti iite kuti inakidze zvirinani.
Kuwedzera izvi zvinongedzo kune rako sitirobheri bhokisi musanganiswa kunozoita keke riwedzere kutonhora uye zvirinani kurongedza. Iwe unogona kunyange kufukidza iri keke mune fondant kana kurongedza akawanda ma tiers ezuva rekuzvarwa kana remuchato keke. Ingo ita shuwa kuti unotonhodza makeke ako kutanga waomesa bota riri mukati mekeke usati waedza kurongedza zvidimbu zvekeke.
maitiro ekuchengeta manyowani matsva kubva pakuumbwa
Kuti uwane rumwe ruzivo nezvekudzidza kugadzira yako yekutanga keke, tarisa yangu maitiro ekugadzira yako yekutanga keke dzidziso .
Unogona here kuwedzera michero mitsva mubhokisi musanganiswa?
Ndakaedza kakati wandei nekuwedzera michero mitsva mubhokisi musanganiswa uye inowanzo shanda chaizvo. Strawberries anoshanda zvakanyanya kana iwe ukashandisa yakaderedzwa puree kana michero inochengetedza kuitira kuti iwe usiri kuwedzera yakawandisa mvura mumakeke keke.
Ndakaedza kuwedzera mahabhurosi akachekwa imwe nguva uye ikazobuda zvakanaka asi iwo mahabhurosi akawana zvishoma mukati mekeke uye akacheneruka achitenderedza mativi.
Kuwedzera sitirobheri puree kubhokisi musanganiswa mhedzisiro mune akanaka epingi matete!
Unoita sei kugadzira sitirobheni yakaturikidzana keke?
Mushure mekusanganisa yako batter yekeke, igovananise kuita matatu 8 makeke emapani. Kana iwe uchingova nepani imwe chete, unogona kubheka imwe panguva uye wosiya iyo yakasara batter mufriji kusvikira iwe uchinge waida.
Rega makeke ako akatonhorera kwemaminitsi gumi mupani wozoaburitsa panzvimbo inotonhorera kuti utonhore nzira yese. Unogona kumhanyisa maitiro aya nekuisa rack pamwe nemakeke mufiriji kweinenge awa. Ipapo ivo vanenge vagadzirira chando.
kuita keke muraraungu
Ndakafunga kuchando echangu sitirobheni keke neremon buttercream! Asi chero rudzi rwebutakuru rwaizoshanda senge kirimu kirimu chando , yakadzikama yakarohwa kirimu kana Nyowani sitirobheri buttercream .
Kugadzira buttercream yangu yakapfava kuita mandimu buttercream, ini ndangowedzera mune mamwe yakachena ndimu curd , muto wemonimu uye zest yemonimu, ndokuzozvisanganisa zvese pamwechete. Iwe unogona kusiya ndimu curd kunze kana iwe usina chero asi yakanaka yummy uye nyore kugadzira!
Zadza matete ako echando nekamoni buttercream. Ini ndinopfura kweanenge 1/4 ″ yemafuta mukaka pakati pemakeke angu emakeke. Dzokorora nezvose zvidimbu zvekeke wobva wavhara keke rese nejasi rakatetepa rebutakuru. Izvi zvinodaidzwa kunzi jasi uye zvisimbiso mune ese makeke mafufu.
Isa keke mufiriji kwemaminetsi makumi maviri kuti usimbise jasi rakakora. Ipapo iwe unogona kuisa yako yekupedzisira dura re buttercream pakeke uye nekushongedza chero nzira yaunoda! Ndakashongedza zvangu ne sweetapolita inosasa . Iyi ndiyo 'Twinkle' inosasa medley! Imwe yezvangu zvandinoda!
buttercream frosting nekupfupisa uye bota
Ini ndinoda kuti zviri nyore sei iyi sitirobheni keki musanganiswa recipe iri! Ndinovimba unozvida futi! Kufara kubheka!
Iyo iri nyore sitirobheri keki musanganiswa recipe iyo inonaka seyakangoita kunge yakanaka sekutanga! Iyo yakanakira yekubheka kana iwe uchida inonaka sitirobheni keke asi iwe uri mupfupi nenguva. Frosted neyummy ndimu buttercream! Gadzirira Nguva:10 mins Nguva Yakabika:30 mins Nguva Yese:40 mins Makorori:505kcal
Strawberry Keke Sanganisa Recipe
▢1 bhokisi sitirobheri keke sanganisa kana chena kana usingawani sitirobheri
▢1 mukombe (5 oz) AP hupfu
▢1 mukombe (7 oz) shuga yakawanda
▢1/4 tsp munyu
▢1 mukombe (8 oz) kirimu yakasviba imba temp
▢1/2 mukombe (4 oz) yakanyunguduka bota
▢1/2 mukombe (4 oz) mukaka
▢3/4 mukombe (6 oz) sitirobheri puree
▢1 tsp sitirobheni emulsion kana kubvisa
▢1/2 tsp mandimu mushoma
Lemon Nyore Buttercream Kutonhora
▢3/4 mukombe (6 oz) pasteurized zai vachena
▢5 makapu hupfu hwehuga
▢3 makapu unsalted ruomba yakanyoroveswa kutembiricha yemukati
▢1/2 tsp munyu
▢piri tsp mandimu mushoma
▢1/4 mukombe ndimu curd sarudzo
▢1 Tbsp mandimu zest
Strawberry Bhokisi Sanganisa Keke Zvinongedzo
Mirayiridzo yekeke iri yakapusa nyore. Chaizvoizvo, isa zvese mundiro uye wosanganisa kwemaminetsi maviri! Voila! Keke batter yagadzirira.
Dururira batter muzvitatu 8 'mapani ekeke akagadzirwa nekeke goop kana yako yaunoda pani kuburitswa. Bika pa350ºF kwemaminetsi makumi maviri neshanu kusvika makumi matatu nemashanu kana kusvika jekiseni remazino rakaiswa rikabuda rakachena
Nyore Buttercream Frosting
Isa pasteurized mazai evachena uye neshuga yeupfu mundiro yemusanganisi wemira ne whisk attachment. Sanganisa pazasi kusvika zvasanganiswa uye wozokwira kumusoro uye chikwapu kwemaminetsi matatu. Ichaita senge yeumambo icing, kwete meringue.
Wedzera mumunyu wako ipapo bhotela rako muzvidimbu zvidiki uchisanganisa pazasi kusvika zvabatanidzwa, wozobhururuka kusvika kumusoro. Chikwapu kusvikira mwenje, chena uye fluffy uye haicharavidze sebhata zvekare. Izvi zvinogona kutora maminetsi gumi nemashanu.
Chinja padanda rekunamatira uye sanganisa pazasi kwemaminetsi gumi nemashanu kuti utsvedzere buttercream uye udzikise matema (sarudzo)
Sanganisa mune rako remoni curd, remon zest uye bvisa kusvikira wabatanidzwa.
Chando uye shongedza keke rako sezvaunoda
Zvishandiso & Zvekushandisa Chinyorwa Zvishandiso Zvinorumbidzwa * chitsamba: iyi runyorwa ine yakabatana zvinongedzo izvo hazvibhadhare iwe chero chinhu asi ini ndinogona kuita mashoma madhiri kubva kutengesa *
Matatu 6 'mapani ekeke
6 'bhodhi rekeke
Matatu matanhatu 'makeke - yakabikwa uye yakatonhora
Nyore Buttercream (rimwe batch)
Strawberry kuzadza (kusarudza)
Kushumira:1g|Makorori:505kcal(25%)|Carbohydrate:55g(18%)|Mapuroteni:3g(6%)|Mafuta:31g(48%)|Mafuta Akaguta:19g(95%)|Cholesterol:97mg(32%)|Sodium:270mg(gumi neimwe%)|Potassium:51mg(1%)|Fiber:1g(4%)|Shuga:44g(49%)|Vhitamini A:986IU(makumi maviri%)|Vhitamini C:5mg(6%)|Calcium:63mg(6%)|Iron:1mg(6%)
yakanyorova vanilla keke kubva pakutanga dhizaini
maitiro ekuverenga maunces pachiyero
chokoreti mousse keke ine girazi glaze
keke yemuchato mapeke kubva mubhokisi musanganiswa
maitirwo ekeke italian meringue buttercream